andaohiresakaobjetfahaxviii [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/0/045a1e5dcbb416f6bbdcb9ef7f7e8900.xhtml failed
Andao Hiresaka Objet indray faha XVIII
Fanorenana lafiny Mpamatsy sy lafiny Mpanjifa (fehiny)
Koa maninona moa raha andao hanovana andrana tena izy amin’izay, sao lasa balahoasy eto fotsiny, sady amin’izay mba hijerena ny fihodinana ?
Koa dia niangavy ny ekipa Ambanivohitra.com ary izahay mba hanome sehatra kely ao amin-dry zareo hanandramana azy ity?
Koa dia izao ary ny fandaminana :
Napetraka amina Mpamatsy tranonkala iray ilay vainga ResakaObjetServer miaraka amin’ireo kilasy rehetra ao an-damosiny. Conteneur Tomcat miaraka amin’ny Apache no ihodinany ao (mbola hisy resaka ihany ny amin’io fa filazana fotsiny eto aloha ?).
Nasiana sehatra kely ahafahana maka ireo fampiasana rehetra efa vitantsika koa amin’ity rohy ity. Koa manana safidy ny mpanjifa mankafy ity resaka ity:
na maka ny fonosana Lahasoratra.jar izay azo ahodina avy hatrany raha toa misy JVM ny milina itodian’ny vainga vao avy nampidinina teo. Fandefasana lahasoratra moa ny tanjona, ka azo atao ny mandefa izany raha tsotsotra ilay izy, sy mifandray @ ny tranonkala ny milina.
na maka ireo source java rehetra nampiasaina hatreto tamin’ity resaka ity. Ireo source ireo moa dia nampidirina anaty fonosana SourceResakaObjet.jar. Koa eto izany dia tsy maintsy mampiasa ny fitaovana famintinana sy fanatsoahana jar isika raha te hisintona ny source ilaintsika.
Ny resaka natao hatreto moa dia nampisehoana ny fampiasana ny teknolojia Objet miaraka amin’ny fitaovana Java, raha hanao fanorenana informatika isika. Ny voaresaka teto moa dia ireo fotokevitra lehibe ifotoran’ny fanatonana miaraka @ ny Objet, ary narahintsika fampiasana ireny rehetra ireny mba ho mora azo ny tiana hampitaina @ n?ilay resaka.
Ny hasiana resaka @ ny manaraka dia ny hitsidika kely ny amin’ny fanorenana manodidina ny laminasa informatika anaty tranonkala (application web), raha mampiasa ny fitaovana Java isika.
Na izany aza dia tsara fantarina mialoha fa endrika iray koa hisehoan?ilay rafitra Mpamatsy-Mpanjifa ireo laminasa manodidina ny tranonkala.
Ary farany mikasika ireo vainga azo alaina ireo dia hoezahana ihany ny hampivoatra azireo miandalana, satria tsara marihina fa tena mbola ny rafitra taolana taingina fotsiny izireo, ka tsy maintsy arindra tsara miandalana mba ho mora velarina ny fiasany. Fa ny hevitry ny maro hono mahataka-davitra ka izay no anaparitahana azy eto.
De tsara ampahatsiahivina koa moa fa ny kozy Java rehetra naroso teto, dia fomba POJO (Plain Old Java Object) no nanoratana azy. Ny mpanoratra koa mpankafy be ny POJO rahateo. !
andaohiresakaobjetfahaxviii.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43